ကာဗာနီ နဲ့ ရတ်ဖို့ကြားပြသနာတချို့ကို Sport Trible မှာ ယူနိက်တက်ပြောခွင့်ရသူပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၈) မှာ လီဗာပူးရဲ့ အန်ဖီးကွင်းမှာသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး0–0သရေရလဒ်ဖြင့် သာ ပွဲဟာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်…
ယင်းပွဲမှာ ယူနိက်တက်ကစားသမားတချို့ ပေါက်ကွဲ မှုတွေ နားလည်မှုလွဲတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်…အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာလည်း ဂိုးရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး တွေရှိခဲ့ပေမယ့် နားလည်မှုလွဲခဲ့တာတွေကြောင့် အနိုင်ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး….
ယင်းပွဲမှာ ကာဗာနီ နဲ့ ရတ်ဖို့တို့ကြားက နားလည်မှုလွဲခဲ့တဲ့ ပြသနာကို လူတိုင်း သိခဲ့ကြပါတယ်….အဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ဘယ်ကစခဲ့သလဲဆိုတာကို ယူနိက်တက်ပြောခွင့်ရသူတဦးက Sport Trible News မှာ ယခုလိုပြောထားပါတယ်….
ရတ်ဖို့ နဲ့ ကာဗာနီ တို့ အဖြစ်အပျက် အခုလိုပွဲ ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ထိ ပါသွားလိမ့်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး…..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီပြသနာက လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ…..လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ကာဗာနီ ရဲ့စနောက်မှုတခုကနေစတာပါ…
ဖြစ်သွားတာက ရတ်ဖို့စ် ကို စနောက်တာမဟုတ်ပါဘူး…..ကာဗာနီက မာရှယ်ကို စနောက်လိုက်တာက လူမျိုးရေး အသားရောင်ခွဲခြားသလိုဖြစ်သွားတာပါ….အဲ့ဒီမှာ ရတ်ဖို့စ်ကပါ စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာတည်းက ကာဗာနီကိုဘောလုံးပေးကစားတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရတော့ပါဘူး…..
အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးတွေရဲ့ မာနအားပြိုင်မှုတွေ ကြားမှာ အသင်းကို နစ်မွန်းသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….